ENWEGHỊ IKE ỊGỤ FAỊLỤ "ITUNES LIBRARY.ITL" - ITUNES - 2019
Nnukwu oghere dị n'etiti okwu dị n'okwu MS - nsogbu ahụ bụ ihe nkịtị. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ha ji ebili, ma ha niile na-ebute nhazi usoro ederede ma ọ bụ ederede na-ezighị ezi.
N'aka nke aka, o siri ike ịkpọ oke ohere n'etiti okwu okwu nsogbu, n'aka nke ọzọ, ọ na-afụ ụfụ, ọ dịghịkwa mma ma ọ bụ na mbipute ebipụta ma ọ bụ na windo ihe omume ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú ị ga-esi kpochapụ nnukwu ọdịiche n'ime Okwu ahụ.
Ihe omumu: Otu esi ewepu okwu na Okwu
Dabere na ihe kpatara nnukwu ikwiikwii n'etiti ikwiikwii, nhọrọ maka ikpochapụ ha dị iche. Banyere onye nke ọ bụla n'ime ha.
Denye ederede na akwukwo rue obosara obosara
Nke a bụ ma ọ bụ ihe kachasị akpata ọdịiche dị oke.
Ọ bụrụ na edepụtara akwụkwọ ahụ iji kwado ihe ederede na obosara nke ibe ahụ, mkpụrụedemede mbụ na nke ikpeazụ nke akara ọ bụla ga-adị n'otu akara ahịrị. Ọ bụrụ na akara ikpeazụ nke paragraf nwere okwu ole na ole, ha na-agbatị aka n'obosara nke ibe. Ogologo okwu n'etiti okwu a di oke.
Ya mere, ọ bụrụ na ụdị nhazi (ibe obosara) adighi mkpa maka akwukwo gi, i kwesiri iwepu ya. Nanị ka ederede ederede n'aka ekpe, nke ị ga-eme ihe ndị a:
1. Họrọ ederede niile ma ọ bụ klas, a ga-agbanwe usoro ya (jiri nchikọta isi "Ctrl + A" ma ọ bụ bọtịnụ "Họrọ ihe niile" na otu "Na-edezi" na ogwe ntụle).
2. Na otu "Paragraf" pịa na "Nye aka ekpe" ma ọ bụ jiri igodo "Ctrl L".
3. Ihe ederede ga-agbatị n'aka ekpe, nnukwu oghere ga-apụ n'anya.
Iji taabụ kama ime ebe ọ bụla
Ihe ọzọ kpatara ya bụ kaabụ dị n'etiti okwu kama ịnọ oghere. N'okwu a, nnukwu akwụkwọ apụtaghị naanị na mpaghara nke paragraf ndị ọzọ, kamakwa n'ebe ọ bụla ọzọ ederede. Iji hụ ma ọ bụ nke a bụ ikpe gị, mee ihe ndị a:
1. Họrọ ihe edere ederede na ngalaba nchịkwa na otu "Paragraf" Pịa bọtịnụ iji gosipụta mkpụrụ edemede na-enweghị ike ịnwụ.
2. Ọ bụrụ na ederede n'etiti okwu na mgbakwunye na isi ihe a na-ahụ anya, e nwekwara akụ, hichapụ ha. Ọ bụrụ na edechaa okwu ndị a, tinye otu ohere n'etiti ha.
Ntuziaka: Cheta na otu ntụpọ n'etiti okwu na / ma ọ bụ ihe odide pụtara na ọ bụ naanị otu ohere. Nke a nwere ike ịba uru mgbe ị na-enyocha ederede ọ bụla, ebe ọ bụ na ekwesịghị inwe ohere ọ bụla ọzọ.
4. Ọ bụrụ na ederede ahụ buru ibu ma ọ bụ na enwere ọtụtụ ntanetị na ya, ha niile nwere ike ihichapụ ozugbo site n'ịme mgbanwe.
Họta otu agwa taabụ ma detuo ya site na ịpị "Ctrl C".
Mepee igbe "Dochie"site na ịpị "Ctrl H" ma ọ bụ na-ahọpụta ya na nchịkwa nchịkọta na otu "Na-edezi".
Gbanye na akara "Chọta" agwa mmadu site na ịpị "Ctrl V" (ime ihe ga-egosi na akara).
Na akara "Dochie ya na" tinye ohere, wee pịa bọtịnụ ahụ "Dochie Nile".
Igbe na-egosi, na-agwa gị na ngbanwe ahụ zuru oke. Pịa "Mba"ma ọ bụrụ na edochila ihe odide niile.
Mechie window windo.
Ihe ngosi "Ọgwụgwụ nke akara"
Mgbe ụfọdụ, nhazi ederede n'ofe obosara bụ ihe dị mkpa, ma na nke a, ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe nhazi. N'ime ederede dị otú ahụ, enwere ike ịgbatị akara ikpeazụ nke paragraf n'ihi eziokwu ahụ na njedebe na e nwere otu agwa "Ọgwụgwụ nke paragraf". Iji hụ ya, ị ghaghị ime ka ngosipụta nke ihe odide ndị a na-anaghị ebipụta site na ịpị bọtịnụ kwekọrọ na otu "Paragraf".
Akara paragraf gosipụtara dị ka akụ na-akụ azụ nke nwere ike na-ewepụ. Iji mee nke a, mee ka cursor na njedebe nke akara ikpeazụ nke paragraf ma pịa igodo ahụ "Hichapụ".
Nke a bụ ihe doro anya na nke kachasị mkpa maka ọdịda nnukwu ọdịiche dị na ederede. Ha buru ibu na nke a naanị n'ihi na ebe ụfọdụ enwere karịa otu - abụọ, atọ, ọtụtụ, ọ dịghị mkpa ọzọ. Nke a bụ okwu mmeghe, na n'ọtụtụ okwu, Okwu ahụ na-emesi ebe ndị dị otú ahụ ike na-acha anụnụ anụnụ (ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na enweghi ebe abụọ, mana ma ọ bụ atọ ma ọ bụ karịa, mgbe ahụ usoro ihe omume ha anaghị egosiputa ọzọ).
Rịba ama: Ọtụtụ mgbe, enwere ike ịchọta oghere ndị ọzọ na ederede ederede ma ọ bụ ibudata na Intaneti. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme mgbe ị na-edegharị ma na-edegharị ederede site na otu akwụkwọ gaa na nke ọzọ.
N'okwu a, mgbe ịmechara ngosi nke mkpụrụ edemede na-enweghị ike ibipụta, na ebe nnukwu oghere ị ga-ahụ ihe karịrị otu oji ojii n'etiti okwu. Ọ bụrụ na ederede dị ntakịrị, ịnwere ike iwepụ aka n'etiti okwu n'etiti aka gị, ma, ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ n'ime ha, nke a nwere ike ịla ọdụ ogologo oge. Anyị na-akwado iji usoro yiri nhichapụ taabụ - ọchụchọ na-esochi ya.
1. Họrọ ederede ma ọ bụ akụkụ nke ederede ịchọta ebe ọzọ.
2. Na otu "Na-edezi" (taabụ "Home") pịa bọtịnụ ahụ "Dochie".
3. Na akara "Chọta" tinye oghere abụọ na akara "Dochie" - otu.
4. Pịa "Dochie Nile".
5. Ị ga-ahụ windo na ọkwa banyere ókè ihe omume ahụ mere ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị abụọ oghere n'etiti ikwiikwii, megharịa ọrụ a ruo mgbe ị ga-ahụ igbe na-esonụ:
Ntuziaka: Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọnụ ọgụgụ nke oghere na akara "Chọta" nwere ike ibuwanye.
6. A ga-ewepụ oghere ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na a na-ahapụfefe okwu (ma edobeghị ya) na akwụkwọ a, na nke a, belata oghere n'etiti okwu dị na Okwu dị ka ndị a:
1. Mepee ihe ederede site na ịpị "Ctrl + A".
2. Pịa taabụ "Nhazi" na otu "Ntọala Ntọala" họrọ ihe "Ọhụụ".
3. Tọọ ntọala "Nchekwa onwe".
4. Na njedebe nke usoro ahụ, nhicha ga-apụta, nnukwu oghere dị n'etiti okwu ga-apụ n'anya.
Nke a niile bụ, ugbu a, ị maara ihe niile kpatara ọdịdị dị ukwuu, nke pụtara ị nwere ike ime ka ohere dị ntakịrị karịa na Okwu ahụ n'onwe gị. Nke a ga - enye aka inye ederede gị ederede ziri ezi, nke nwere ike ịlele nke na - agaghị ewepụ site na nnukwu anya n'etiti okwu ụfọdụ. Anyị na-achọ ka ị rụpụta ọrụ na ịmụta ihe dị irè.